Maraykanka, 10 October 2017
Talaado 10 October 2017
Dab Xoog Leh oo Hadda Ka Soconaya California
Ugu yaraan 10 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dab xoog leh oo ka soconaya meelo badan oo ka mid ah gobolka California ee dalka Mareykanka.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo Iscasilay
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa iska casilay safiirnimada sababo la xiriira arrimo isaga u gaar ah.
Trump oo Burrin Doona Heshiiskii Nuclear-ka Iran
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu burriyo heshiiskii Niyukleerka ee Iran, isaga oo dib ugu celin doono aqalka Congareeska si cunaqabateyn cusub loo saaro Iran.
Mareykanka oo Xaqiijiyay In Askar Looga Dilay Niger
Milatariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay in saddex askari looga dilay waqooyigalbeed ee dalka Niger, kadib marki ay la kulmeen weerar gaadma ah xilli ay wadeen howlgal roonda ah.
Muslimiinta iyo Yahuuda Mareykanka oo Isbaheysi Sameystay
Isbaheysi ay sameysteen Muslimiinta iyo Yahuudda Mareykanka si uu ula dagaalamo naceybka ka dhanka ah bulshooyinkaas, una aas-aaso xiriir wanaagsan oo dhex-mara, ayaa sii ballaaranaya
Baarayaasha oo Ku Jah-wareersan Weerarkii Las Vegas
Taliyaha ciidanka booliska ee magaalada Las Vegas Joseph Lombardo ayaa sheegay in ay rumeysanyihiin in baarayaasha ay heli doonaan sababaha keenay toogashi ugu xumeyd ka dhacda Mareykanka taariikhdan casriga ah.
Ninka Fuliyey Weerarkii Las Vegas oo Haystay 42 Qori
Boliiska gobolka Neveda ee dalka Mareykanka ayaa 23 qori ka helay qolkii uu weerarka ka fuliyey ninkii dadka ku toogtay magaalada Las Vegas, ayada oo sidoo kalena 19 qori oo kale laga helay gurigiisa.
Toogasho Dhimasho Badan oo ka Dhacday Las Vegas
Ugu yaraan 58 qof ayaa ku geeriyootay, in ka badan 500 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday goob uu ka socday bandhig faneed, magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka.